နော to ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပို့လိုက်ရုံပဲ။ | Martech Zone
နော to ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပို့လိုက်ရုံပဲ။
တနင်္ဂနွေ, နိုဝင်ဘာလ 25, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီနှောင်းပိုင်းပြေးဘို့တောင်းပန်ပါတယ်! ကျနော်တို့မှ entries တွေကိုများစာရင်းကိုစေလွှတ်ခဲ့သည် Ade က တစ်ခုချင်းစီကို entry ကို (Excel ကိုအတွက် RAND function ကိုသုံးပြီးပြီးတော့ကော်လံ sorting) ကျပန်းနံပါတ်နှင့်အတူရှိခြင်းနှင့်အတူ။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ရှိခဲ့ပါတယ် Hanns 108 entries အတွင်းမှာကျပန်းနံပါတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သူကမည်သူသည်မည်သူအနိုင်ရသည်ကိုမသိနိုင်ပါ။ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပေးအပ်သည့်ဆုကိုရရှိသူမှာနော at ဖြစ်သည် wpstar.com!
Paypal ငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကျွန်ုပ်သည်ဒေါ်လာ ၁,၀၄၀ ကိုနော to ထံပို့ခဲ့သည်။ နောကိုဂုဏ်ယူပါတယ် ကျန်တဲ့ဆုတွေလည်းသူတို့လမ်းပေါ်မှာရှိနေမှာပါ။
Tags: အလိုအလျောက်ဂီတ microdataလူများ microdataကုန်ပစ္စည်း microdataအများအပြားကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူထုတ်ကုန် microdataနောက်လိုက်တွိyoutube ပုံရိပ်
Web 2.0 ဒီဇိုင်းကိုဖျက်ပစ်သင့်သလား။
Yahoo! စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ... မင်းငါ့ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ပြီ။
နိုဝင်ဘာလ 25 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 5:56 နာရီ
အံသြစရာ။ ဒါတောင် ပြေးလို့ကောင်းတယ်။ လက်ဆောင်ကို စီစဉ်ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည် Doug။
နိုဝင်ဘာလ 25 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 6:00 နာရီ
အိမ်မှာ တနေကုန် နေမကောင်းဖြစ်တော့ ဒါက အံ့သြစရာ ကောင်းတယ်။ ပြောချင်တာက ဒါက မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကို မကြာခဏဖတ်ဖို့ တွန်းအားတစ်ခုလို့ ငါပြောပေမယ့် ပို့စ်တိုင်းကို တော်တော်ဖတ်ပြီးသွားပြီ။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ပြိုင်ပွဲကြီးကို ကျင်းပပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ မင်းနဲ့ မင်းရဲ့ စပွန်ဆာတွေလည်း ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီလိုအရာမျိုးက ကျွန်တော့်ဇနီးအတွက် ဘလော့ဂ်ဖတ်ချိန်ကို တရားမျှတအောင် ကူညီပေးပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ 25 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 7:31 နာရီ
ဂုဏ်ယူပါတယ် နောဧ။ အပိုဆုများအတွက် လင့်ခ်များကို ယခုလေးတင် ပေးပို့လိုက်ပါသည်။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါ - မင်းရဲ့ နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲ Doug ကို စောင့်မျှော်နေပါတယ် 😉
30:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 4, 59
ကံကောင်းတယ်၊ ကံကောင်းတဲ့ကောင်။ သင်၏ဘလော့ဂ်၊ Noah တွင် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပပြီး iPod ကိုပင် ပေးသင့်သည်။ 😉
အခြား ကံထူးရှင်တွေကို ဘယ်တော့ကြေညာမလဲ။
30:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 32
အားလုံးက ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ဆုရှင်ဆီရောက်သွားတယ်။ နောက်ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမ၊ဒုတိယ၊တတိယဆုတွေရမှာ သေချာပါတယ်... ဒီပြိုင်ပွဲက အနိုင်ရသူ ၁ ယောက်ပဲရှိတာမို့ အာရုံစိုက်စရာလို့မထင်ပါဘူး။ (ဒါပေမဲ့ နောဧကို ပျော်ရွှင်စေတယ်။)
30:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 42
အိုး အိုကေ။ အဲဒီတုန်းက နားလည်မှုလွဲသွားတယ်။
မင်းရဲ့ နောက်ပြိုင်ပွဲအတွက် မင်းလည်း လူတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဝင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ရေးဖို့စပွန်ဆာ 10 ယောက်ရှိတာက သိပ်အားရစရာမရှိပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အပိုထည့်သွင်းမှုများကို လိုချင်ကြသော်လည်း၊ သင့်အား SU တွင် လက်မထောင်ပြခြင်း၊ သင်၏ feed ကို စာရင်းသွင်းခြင်း၊ Technorati ကိုနှစ်သက်ခြင်းစသည်ဖြင့် သင့်အတွက် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိနိုင်သောအရာများအတွက်၊
21:2008 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 24
ပို့စ်ကောင်း။ လူအများစု အပြည့်အဝနားမလည်တဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို သင်လုပ်တယ်။
"ဒီလို နောက်ကျသွားတာ တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထည့်သွင်းမှုတစ်ခုစီတွင် ကျပန်းနံပါတ်တစ်ခုစီပါ၀င်သည် (Excel တွင် RAND လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြု၍ ကော်လံကိုစီခြင်း) ဖြင့်ထည့်သွင်းထားသောစာများစာရင်းကို Ade သို့ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် Hannes သည် 108 entry များအတွင်း ကျပန်းနံပါတ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ထားသောကြောင့် Hannes သည် အနိုင်ရသူဖြစ်မည်ကို မသိနိုင်ပါ။ $1,000 giveaway ၏ဆုရှင်မှာ wpstar.com တွင် Noah ဖြစ်သည်။"
မင်းရှင်းပြတာကို ငါသဘောကျတယ်။ အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ကျေးဇူးပါ။